कानूनी समर्थनको साथ सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिनुहुन्छ? हामी यहाँ तपाईंलाई सहयोग गर्न आएका छौं
तलाक कानून » सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन
के तपाइँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिन चाहानुहुन्छ? त्यसो भए तपाईलाई आफ्नो सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी सम्झौताको लागि एक वकिल चाहिन्छ। Law & More तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छ। तपाईं र तपाईंको पार्टनरसित सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा हुन्छन्।
एक DIVORCE को लागी आवेदन गर्दै?
सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन
के तपाइँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिन चाहानुहुन्छ? त्यसो भए तपाईलाई आफ्नो सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी सम्झौताको लागि एक वकिल चाहिन्छ। Law & More तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छ।
> पारस्परिक परामर्श मा तलाक
> सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता
> अभिभावक योजना
> बच्चाहरूसँग सम्बन्धविच्छेद
तपाईं र तपाईंको पार्टनरसित सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा हुन्छन्।
A सम्बन्धविच्छेदमा कुन कुरा मुछिएको हुन्छ?
Home घरमा कसले बाच्नेछ र कसले घर छोड्नेछ वा घर बेच्नेछ?
Your तपाईंको बच्चा (रेन) को हेरविचार कसरी व्यवस्थित गरिएको छ?
Child बच्चा र पार्टनर गुनासोको भुक्तानीको बारेमा केमा सहमति छ?
• र तपाईं आफ्नो सम्पत्तिहरूको वितरणको बारेमा के सम्झौता गर्नुहुन्छ?
के तपाइँलाई तपाइँको सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा, सम्बन्ध विच्छेद सम्झौताको मस्यौदा र प्यारेन्टिंग योजनाको मद्दतका लागि कानुनी सहयोग चाहिन्छ? Law & More तपाईं आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो वकिलहरु को पारिवारिक कानून को क्षेत्र मा विशेषज्ञ ज्ञान छ। हामी तपाईंलाई मद्दत गर्नेछौं यदि तपाईं सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ वा यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनर आपसी सम्झौताले सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्छ भने।
पारस्परिक परामर्श मा तलाक
यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनर एक अर्कासँग परामर्श गर्न र सँगै सम्झौतामा पुग्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई र तपाईंको साथीलाई हाम्रो कार्यालयमा बैठकहरूमा स्पष्ट सम्झौता गर्न सहयोग गर्नेछौं। सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा सम्झौता भए पछि हामी यो निश्चित गर्दछौं कि यी सहि राम्ररी सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता र सम्भावित प्यारेन्टिंग योजनामा ​​रेकर्ड गरिएका छन्। एक पटक सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता को रूप मा तैयार र तपाईं र तपाईंको साथी द्वारा हस्ताक्षर गरे, सम्बन्ध विच्छेद कार्यवाही अक्सर चाँडै पूरा गर्न सकिन्छ।
दुर्भाग्यवस, पूर्व साझेदारहरू बीचको तनाव कहिलेकाँही धेरै हुन्छ, त्यसैले अब आपसी परामर्श राख्नु र संयुक्त सम्झौताहरूमा पुग्न व्यावहारिक हुँदैन। त्यसोभए तपाईं एक सम्बन्ध विच्छेद वकिलको पेशेवर मद्दतको लागि आउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंको लागि सबै कानुनी पक्षहरू छलफल गर्नेछन्। हामी तपाईंको लागि उत्तम सम्भव नतिजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्छौं। त्यसो गर्दा हामी प्रत्येक कानुनी पक्षलाई होशियारीसाथ विचार गर्छौं। सम्बन्ध विच्छेद करार र प्यारेन्टिंग योजनाले तपाईंको भविष्य र तपाईंको बच्चाको (भविष्य) भविष्यको लागि आधार तयार गर्दछ। यसैले यो कागजातहरूको सामग्रीको बारेमा सोच्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ Law & More वकिल। यस तरिकाबाट तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि सबै सम्झौताहरू कानुनी रूपमा सही तरिकामा कागजमा राखिनेछ।
सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता
एक सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता, यसको मतलब के हो? सम्बन्ध विच्छेद सम्झौता भनेको तपाइँ र तपाइँको पार्टनर बीच लिखित सम्झौता हो। यस करारमा अन्य सम्झौताहरू, साझेदार भत्ता, घरेलु प्रभावहरूको वितरण, वैवाहिक घर, पेन्सन र बचतको वितरणको बारेमा सबै सम्झौताहरू समावेश छन्। .
के तपाईंको नाबालिग बच्चाहरू छन्? यदि त्यसो हो भने, प्यारेन्टिंग योजना बनाउनु अनिवार्य छ। सम्बन्ध विच्छेदको लागि सम्झौता र अभिभावकीय योजना दुबै पक्ष सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिन। प्यारेन्टिंग योजनामा, बच्चाहरूको जीवन स्थिति, छुट्टिको वितरण, पालनपोषण र भ्रमणको व्यवस्थाको बारेमा सम्झौताहरू गरिन्छन्। हामी तपाईंलाई सम्झौता बनाउन र रेकर्ड गर्न मद्दत गर्दछौं। हामी बच्चाको गुनासो गणना पनि गर्छौं।
निम्न घटकहरू अनिवार्य छन्:
Care सबै हेरचाह र पालनपोषण कार्यहरूको एक विभाजन;
You बच्चाको बारेमा एक अर्कालाई जानकारी दिने तरीकाको बारेमा सम्झौताहरू;
Im भत्ताको राशि र अवधि जुन तपाईं वा तपाईंको साथीले बच्चाको पालनपोषण गर्न तिर्नुहुनेछ;
Who स्पोर्ट्स क्लबमा सप्ताहन्त शिविर जस्ता विशेष लागतहरू को भुक्तानी गर्छ भनेर सम्झौताहरू।
अनिवार्य कम्पोनेन्टहरूको साथसाथै, तपाई र तपाइँको पार्टनरले महत्त्वपूर्ण ठानेका विषयहरुमा सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। तपाईं तलका सम्झौताको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ:
School स्कूल छनौट, चिकित्सा उपचार र बचत खाताहरूको बारेमा सम्झौताहरू;
• नियमहरू, उदाहरणका लागि ओछ्यान समय र दण्डको बारेमा;
Family परिवार, हजुरबा हजुरआमा, हजुरआमा, काका र काकी जस्ता सम्पर्क।
सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिनाले तपाई र तपाईको पार्टनरको जीवनमा मात्र ठूलो असर पार्दछ, तर तपाईको बच्चा (रेन) मा पनि। सम्बन्ध विच्छेदको परिणामस्वरूप तपाईंको पार्टनर तपाईंको पूर्व साझेदार बन्छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको भूतपूर्व पार्टनर पनि भूतपूर्व अभिभावक बन्छ। तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग सम्बन्ध विच्छेदको बखत र पछी काम गर्न धेरै मेहनत चाहिन्छ। जे होस्, आमाबाबुलाई सहयोग गर्नु बच्चाहरूको भलाईको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै सम्पर्क वा बिग्रिएको कुनै अभिभावकको सम्पर्कले बच्चाको लागि गम्भीर नकारात्मक असर पार्न सक्छ। चाहे तपाईं जवान वा ठूलो बच्चाहरू हुनुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रियामा उनीहरूको रूचि ध्यानमा राख्नु पर्छ।.
तपाइँको बच्चाहरुले सम्बन्ध विच्छेदबाट सकेसम्म थोरै कष्ट भोग्नु पर्छ भनेर सुनिश्चित गर्न, स्पष्ट सम्झौता गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामी तपाईंलाई कानुनी सल्लाह दिन्छौं र तपाईंको पक्षमा सम्झौता गर्दछौं।